Hayyoonni wolgahii OPDO’n waamte irratti argaman gaafii ciccimoo kaasaa jiran - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Hayyoonni wolgahii OPDO’n waamte irratti argaman gaafii ciccimoo kaasaa jiran
Hayyoonni wolgahii OPDO’n waamte irratti argaman gaafii ciccimoo kaasaa jiran
Hayyoonni Oromoo 2500 taán yunivarsiitotaafi dhaabbilee barnoota sadarkaa oláanaa addaddaa irraa wolitti bayan marii bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti waame irraa qooda fudhataa jiran. Marii kana kan hoogganaa jiru ob.Lammaa Magarsaa (pirezidaantii) fi ob. Umar Huseen (itti aanaa pirezidaantii) naannoo Oromiyaati.
Marii kana irratti dhimmoonni ijoon yeroo dheeraaf ummata Oromooo yaachisaafi naannoo rakkoo keessatti hanbisaa turan bifa gargaraan kaánii mariin oo’aan irratti godhamaa jira. Keessattuu waaéen Finfinnee, Afaan Oromoo afan federaalaa godhuu fi haalli siyaasaa naannoo Oromiyaa akkasumas woliigala Itoophiyaa qabxiilee hirmaattonni xiyyeeffannaa itti laataniidha. Ammas, dhimmi waaée hidhamtoota siyaasaafi olántummaa seeraa irrattis marii iaasifameera. Hayyoonni marii irraa qooda fudhataa jiran waaée qulqullinni barnootaa gadi buáa dhufuu, akkasums hawaasa isaanii tajaajiluuf hiree dhabuus kaasaniiru.
Ob.Lammaan faatis akkuma worra isa duraa gaafii fi yaada hayyootaa dhaggeefatanii calisu moo deebii itti laatu? Ammatti wanti ifa ta’e hin jiru. Haala Oromiyaan itti jirtu qajeelchee kan hubatu gowwoomsaa akka tooftaatti hin fudhatu. Ob. Lammaafi jaallewwan isaa tooftaan gowwoomsaafi yeroo bitannaa kana booda faana takka akka isaan hin tankaarfachiisne baranii, wareegamas yoo isaan kaffalchiise, gaafii ummataaf deebii laatuu qabu. OPDO’f wabii jireenyaa kan ta’u aantummaa Oromoof qaban hujiin mirkaneessuu qofa.
Previous articleCimuun qabsoo Oromoo alagaa woccisiisa; hirribas dhabsiisa
Next articleWorri har’a Finfinnee falmatu boru Oromiyaa irratti gaafii dhiyeessuu irraa hin qaanfatu